Ingqungquthela yoNyaka ye-IATO ngoku emiselwe uDisemba eLeela Gandhinagar
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Ingqungquthela yoNyaka ye-IATO ngoku emiselwe uDisemba eLeela Gandhinagar
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ingqungquthela yoNyaka ye-IATO eza kubanjelwa eLeela Gandhinagar
Ingqungquthela yaminyaka le engama-36 ye-IATO eza kubanjelwa eGandhinagar Gujarat ukusukela nge-16 ukuya ku-Disemba 19, 2021, ngendibano eyayiseLeela Gandhinagar, yazisa uMnu. kwingxelo ekhutshwe nguye namhlanje, nge-11 ka-Okthobha ka-2021.
Le Ngqungquthela yoNyaka ekugqibeleni iqhubeka emva kokuba imisiwe ngenxa ye-COVID-19.
Ukubamba umsitho ngoDisemba, abaququzeleli bakholelwa ukuba kunika abathathi-nxaxheba ixesha elaneleyo lokugqiba inkqubo yokugonywa ngamayeza amabini ngaphambi kwendibano.
Inkqubo emiselweyo yokusebenza kunye nemimiselo ngokubhekisele kwi-COVID iya kulandelwa ngokungqongqo.
Ngelixa ebhengeza isigqibo seKomiti Elawulayo, uMnu Rajiv Mehra uthe, “Saceba ukuba nendibano yethu eGujarat ngoSeptemba 2020 kodwa kwafuneka simise enye ngenxa yeCOVID-19.
“Kuba imeko iyaphucuka ngoku imihla ngemihla kwaye izitofu zishushu, sikholelwa ukuba uDisemba ingalixesha elifanelekileyo lokuba nendibano yethu. Oku kuya kunika ixesha kubachaphazelekayo ukuba bafumane idosi yabo yesibini, abangakhange bayithathe ukuza kuthi ga ngoku, kwaye bakulungele ukuya kwindibano. Zonke ii-SOP kunye nemigaqo ziya kulandelwa ngokungqongqo, kwaye bonke abathunywa abaza kuzimasa le ndibano kuya kufuneka bangenise [ikopi] yesatifikethi esipheleleyo sokugonywa, kwaye ngokusekwe kuloo nto, ukubhaliswa kwabo kwindibano kuya kwamkelwa.
"Sibuya eGujarat emva kwesithuba seminyaka eli-10, kwaye iya kuba lithuba elihle kakhulu kumalungu ethu ukubona iziseko zophuculo neziphuhlisiweyo eGujarat."
URajiv Mehra, uMongameli, uMbutho waseIndiya wabaSebenzi boKhenketho (IATO)
UMnu. Mehra ukhankanye: “Impumelelo engummangaliso yale ndibano inyuse ulindelo lwamalungu nabaxhasi. Bangaphezulu kwama-900 abathunywa abalindelweyo kulo msitho weentsuku ezintathu, kwaye indibano yeIATO ilindelwe ngabantu bonke. ”
Uye wakhankanya ukuba eli shishini lihamba ngexesha elibi kakhulu kwaye eyona nto kugxilwe kuyo iya kuba neengxoxo malunga ingaluvuselela njani ukhenketho kwaye uyibuyisele kumanqanaba angaphambi kwe-COVID.
Kuya kuququzelelwa iiNdwendwe zeeNdibano ezahlukeneyo, eziza kuba nomdla omkhulu IATO kwezinye iilwimi amalungu. Ngaxeshanye kunye nendibano, kuzakubakho iTravel Mart, eyakuba lithuba lokuba ababonisi babonise uluhlu oluchulumancisayo nolwahlukeneyo lweendawo, iinkomfa, kunye neendawo zokukhuthaza ikakhulu oorhulumente.